Ku Dhaqan Arimahaan Hoos Ku Xusan Si Aad U Noqoto Qof Qurux Badan Oo Caafimaad Qabo..!!! | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: March 13, 2014, 2:34 pm
Waxaa jira habab dabeeci ah, taas oo inta badan dadka ay sahashadan culimada khubarada ku ah arimahaas ayaa ku sheegay tobankan hab ee aynu hoos kusoo xusnay in lagu heli karo qurux saafi oo aan gabow laheyn, maxa yeelay waxaa dhacda in la arko qof da’adeeda iyo muuqaalkeeda aan isku dhigmin, hadaba si aad kaga hortakto samee habkan aan dhibka badnen laheyn balse ubaahan baraarug: .
Biyaha badan jirka waxey u leeyihiin ahmiyad dadkuna kama dadaalan in ay cabaan biyo ku filan jirkooda waxaa dhacda in qofku marka uu haraado in uu cabo 2 am 3 koob maalintii, iyadoo la rabo inuu cabo liter iyo bar qiyaastii maalinkasta.
Biyuhu jirka ayey nadiifiyaan maqaarkana way quruxiyaan, waxaad is hor dhigtaa biyaha mar walba si aad u xasuusatid biyaha inaad cabtid, marka danbe waad laqabsan doontaa. Qalad ayaa loo fahmay biyaha oo waxaa lamoodaa in marka la haraado kaliya la cabo, waxaase loo cabaa jirku inuu ubaahanyahay sidaa darteed jirkaagu inta uu ubaahanyahay sii biyo ku filan.dhaqdhaqaaqaaguna waa inuu bataa, cashadaaduna waa inay yaraata sababtoo ah waad seexanaysaa wax yar kadib jirkaaguna xiligaas wax ma gubayo, jirkaaga nasi!
Jirkaagu wuxuu ubaahanyahay daganaansho, naftaaduna waxay ubaahantahay nasasho, hurdada yari raad ayey ku reebtaa qofkajirkiisa iyo naftiisa, sidaa darteed iska ilaali in aad dhafarto habeenkii, seexo markay mugdi noqoto, soona kac markay iftiin noqoto, macnaheeduna waa fiid seexo waabarigana soo kac.
Waxaad tahay waxaad cunto!
Hadaad badsatid cunida subaga waxaad noqonaysaa qof baruur badan, hadaad badsatid cunida khudaarta iyo faakahada waxaad noqonaysaa qof ay ka muuqato nafaqo iyo caafimaad. Yaree subaga cunidiisa waxaa laguu ogolyahay maalintii 30% kaliya inaad cuntid oo jirka ayaa ubaahan, laakiin hadaad ka badisato waa dhib aad ukordhisay jirkaaga, xasuuso mar walba in uu gubo jirkaaga subaga uu cunay.
Badso khudaarta iyo faakahada si nolol caafimaad leh aad u heshid, waxaanad noqonaysaa qof ka badbaaday cudurada waawayn oojir dhuuban oo qurux badan leh.
Qoraxda badani waxay keentaa dhibaato, waxaana kamid ah in wajiga yeesho miin ama jactad iyo halmadow, quruxda wajiguna way tagtaa, maqaarkaaguna wuxuu u ekaanayaa qof dagdag u gaboobay.
Jooji sigaarka, iskana yaree cabista kafega.
Sigaarku maaha wax caafimaad leh, dhibtiisuna aad ayey u badan tahay xanuuno waawayn ayuu kuu keena jirka sida kansarka, wajigana wuxuu ku keenaa miin ama jactad, midabka wajigaagana wuu badalaa. Kaffega cabidiisa yaree oo maalintii 2-3 koob ha ka badin si dhibtiisa aadan uhelin.
Aad u isticmaal qudaarta oo aad ka heli karto vitamins kala duwan sidoo kale waxad isticmaali kartaa kaniinada laga helo vitamiinada uu jirku u baahanyahay, dumarku waxayubaahanyihiin A-vitamin, B-vitamin, C-vitamin, E-vitamin, jod, Kalcium, selen.
Farxad iyo jacayl.
Naftaada sii inay faraxdo waxna jeclaato, la farax dadka aad la joogtid, jecloow dadka aad la dagantahay, nafsiyadaada uraaxee oo sii inay qososho oo ay faraxdo, jecloow dadka ku jecel, la farax dadka aad jeceshahay. Farxada iyo jecaylku yaraan ayey kuu siyaadinayaan.
Muuska waan jeclnahay oo badana ma qadayno la`aantiisa, balse gabadha Soomaaliyeedow miyaad ogtahiin in muuska u yaala ay isku qurxin karaan? muusku wuxuu leeyahay faa`idooyin badan iyo fiitamiino caawinaysa maqaarkaaga, kana dhigaya liisho, sidaasina waxay kugu cawinaysaa inaad quruxdaada ilaalisid Hadaba habkan u isticmaal muuska:
Waxaad jarjartaa muuska oo yaryaree, kadib wajiga saar in 20 daqiiqadood u dhow, sidaasu wajigaagu ku nuugayaa “dhuuqayaa” saliida iyo fiitamiinka ku jira muuska.
Muuska yaryaree kadib waxaad ku dartaa saliida lawska,kadib isku walaaq, kadibna timahaaga mari oo kudaa 15 daqiqadood. Markaad dhaqdid timahaaga oo aad dhawr jeer sidaas u isticmaashidna waxaad dareemi doontaa isbadal wayn, timahaaguna way kuu dhalaali doonaan wayna jilci doonaan.